Immisa jeer ayey tahay inaad timahaaga dhaqdo | Ragga Stylish
Immisa jeer ayaad u baahan tahay inaad timahaaga dhaqdo
Xaqiiqdii waad ka fikirtay wax ka badan hal jeer taas haddii aad si joogto ah u maydho timahaaga waxay u fiicnaan doontaa ama caafimaadkaaga uma aha. Waxaa laga yaabaa inaadan si xun ugu soconayn inaad ka fikirto haa, maadaama laga yaabo haddii aad gaadhay gabagabadan sababta oo ah waa waxaad bilawday inaad fiiriso timo xoogaa nashaad ah oo aadan helin sababaha. Qaybaha jidhkeenna qaarkood waa inay ku sii socdaan wareegga caadiga ah iyo kan dabiiciga ah, mana aha inay si joogto ah ugu sakhraamiyaan alaabada macmalka ah.
Munaasabaddan, timuhu way xanuunsadaan haddii aan u dhigno maalin walba maydhasho joogto ah. Si fudud biyo ugu qoy oo ku mayr waa ku filan tahay haddii timuhu uurku yeelan waayo wasakh. Nasiib darrose ma jiraan wax cilmi ah oo si sax ah u soo sheega xogtan, waxa aan ognahay waa taas Nooc kasta oo timo ka mid ah ayaa ku jira qaab ka duwan waana inaan ka feejignaano daryeelkaas aan u baahan nahay.
1 Immisa jeer ayaad u baahan tahay inaad timahaaga dhaqdo?
2 Maxaa dhacaya haddii aad qubeysatid maalin kasta?
3 Ogow haddii timahaagu ay buux dhaafsheen
4 Isticmaalka qaboojiyaha, maaskaro ama qalajiyaha
Immisa jeer ayaad u baahan tahay inaad timahaaga dhaqdo?
Khubaradu waxay kugula talinayaan inaad timahaaga dhaqdo labo ilaa saddex jeer usbuucii (ugu badnaan) maadaama ay kufilan tahay in la muujiyo timo caafimaad qaba. Haddii, liddi ku ah, qaab nololeedkaaga ama shaqadaadu u baahan tahay inaad ku dhaqdo maalin kasta, waxaa jira shaambooyo loogu talagalay timaha loo isticmaalo maalin kasta si aysan ula kulmin wax saameyn ah.
Timaha ma xanuunsana, madaxaaga ayaa ku xanuunsanaya. Xaqiiqda inaad maydho timahaaga maalin kasta iyo waxsoosaar kasta waxay ku dambayn kartaa inaad saliid ku urursato madaxa, sidaa awgeed jiilka khamiirka dabiiciga ah iyo abuuritaanka cufnaanta Halkan laga bilaabo, dhibaatooyinka qaarkood waxay bilaabaan inay noqdaan kuwo rasmi ah, sida timo luminta ama maqaarka.
Haddii timahaagu fiicnaadaan ama dufan yihiin, macno malahan in maalin walba la dhaqi karoKaliya waa inaad doorataa nooca sheyga aad ugu baahan tahay timaha noocan ah. Isla sidaas ayaa ku dhacda dadka ciyaara cayaaraha, kuwa ku dhaca nooc ka mid ah dhidid dhidid awgood ama kuwa u soo bandhigaan wax kasta oo dhexdhexaad ah oo wasakheeya oo daloola daloolahooda. Sababtaas awgeed waa lagama maarmaan in la dhaqo si loo awoodo in loo nadiifiyo dhammaan godadkaas ay ku xirmeen sababahan.
Maxaa dhacaya haddii aad qubeysatid maalin kasta?
Waxaa jira farsamada “Maya Shaambo” inkasta oo ay u muuqato waxoogaa daruuro ah, waa inaan qubeysanaa maalin kasta oo aan shaambo marin. Waxaan raaci karnaa a nadaafadda Sidaan caadada ahaan jirno, waa inaan qoyno oo keliya oo aan biyo raacino maalmaha ay tahay inaanan timo dhaqin. Sidan oo kale waxaan awoodi karnaa oo keliya inaan ka saarno wasakhda deegaanka ee maalinta oo aan awoodno inaan si dabiici ah u ilaashanno saliidaha dabiiciga ah ee timaha.
Ogow haddii timahaagu ay buux dhaafsheen
Way fududahay in la ogaado sababta timahaagu u silcayaan. Waxay u badan tahay inaad dareemi doonto inay qalalan tahay oo caajis tahay Mana imaanaysid gunaanadka inaad dhaqaysid marar badan. Timuhu waa faybar nool oo qallalan laakiin leh qoyaan. Isticmaalka xad-dhaafka ah ee shaambo ayaa ka saaraya qoyaanka xad-dhaafka ah sidaa darteedna waxay u rogaysaa timo daciif ah oo dhaawacmay.
Dhinaca kale, maadaama ay ka saarayso qoyaankaas, sidoo kale waxaad ka saareysaa wax soo saarka saliida dabiiciga ah timaheena, samaynta madaxeena shaqo si aan u helno inbadan oo saliid ah. Inbadan oo kamid ah waxsoosaarkan sida aan soo sharaxnay wey awoodaa timahaaga u daato ama ka noqoshada xad dhaafka ah ee dufankaaga dabiiciga ah ayaa sababi kara timo fidsan, aan naf lahayn oo caajis ah.
Haddii timahaagu u baahan yihiin in la dhaqo maalin kasta, markaa waa inaad u weecataa alaabada gaarka ah ee noocyada qaarkood ee gaarka u ah isticmaalka maalinlaha ah, leh waxyaalo dabiici ah oo qoya oo xushmeeya madaxa. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin waxyaabo u gaar ah inay yihiin anti-dandruff oo aad u ixtiraama timaha jilicsan iyo jilicsan.
Isticmaalka qaboojiyaha, maaskaro ama qalajiyaha
In kasta oo aan ku guuleysanay in aan isdaahirinno si isdaba joog ah oo ku xiran nooca timaha ama qaab nololeedka, waa inaanan ilaawin qaboojiyaha ama waji xidhka Alaabooyinkani sidoo kale waa u muhiim daryeelkayaga maadaama ay ka caawinayaan inay qoyaanka timaha ku hayaan.
Markii aad dhaqeysid timahaaga wax aad u yar inta lagu jiro usbuuca waxaa muhiimad weyn leh in qoyan laga dhigo, iyo dalbashada qaboojiyaha ama waji-xidhashada ka dib maydhashada ayaa ka caawinaysa inay ku sii hayso ilaa dhaqitaanka xiga. Maaskarada waa la codsan karaa ilaa 20 daqiiqo iyo qaboojiyahayaashu waa caddeyn degdeg ah. Hal shay oo muhiim ah ayaa ah in timaha si fiican loo luqluqo ka dib marka la codsado.
Isticmaalka qalajiyaha haa waa la ogol yahay hadaad runtii u baahan tahay. Waxaad isticmaali kartaa tilmaamahan haddii aad rabto inaadan dhaawacin timahaaga: isku day inaad ka qalajiso kor ilaa hoose iskuna day inaadan aad ugu dhawaanin timahaaga. U isticmaal heerkulka ugu yar awood ahaan kuna dhammee qalajinta hawo qabow, tani waxay xireysaa googo'yada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Immisa jeer ayaad u baahan tahay inaad timahaaga dhaqdo